1 Ahene 14:1-31
14 Saa bere no ara mu na Yeroboam ba Abia yaree.+ 2 Enti Yeroboam ka kyerɛɛ ne yere sɛ: “Sɔre ɛ, na sakra+ wo ho na obiara anhu sɛ wone Yeroboam yere, na kɔ Silo. Hwɛ! Ɛhɔ na odiyifo Ahiya+ wɔ. Ɔno na ɔka kyerɛɛ me sɛ mɛyɛ ɔman yi hene.+ 3 Fa paanoo du+ ne paanoo a wɔapete so, ne ɛwo toa+ biako, na kohu no.+ Ɔno na ɔbɛka nea ɛbɛyɛ abofra no akyerɛ wo.”+ 4 Enti Yeroboam yere yɛɛ saa. Na ɔsɔre kɔɔ Ahiya fie wɔ Silo.+ Saa bere no na Ahiya nhu ade, na onyin nti n’ani ayɛ kusukusu.+ 5 Ná Yehowa aka akyerɛ Ahiya sɛ: “Yeroboam yere reba wo nkyɛn abebisa biribi ne ba ho efisɛ ɔyare. Sɛɛ ne sɛɛ na ka kyerɛ no. Sɛ ɔba a, ɔbɛsakra ne ho ayɛ ne ho sɛ obi foforo.”+ 6 Bere a Ahiya tee ɔbea no nan ase wɔ ne kwan ano ara na ɔkae sɛ: “Yeroboam yere,+ bra mu. Dɛn nti na woasakra wo ho ayɛ wo ho sɛ obi foforo bere a wɔasoma me sɛ menka asɛm a ano yɛ den nkyerɛ wo yi? 7 Kɔka kyerɛ Yeroboam sɛ, ‘Nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni: “Memaa wo so wɔ me man mu ma wudii me man Israel anim,+ 8 na mihwim+ ahenni no fii Dawid fie de maa wo, nanso woanyɛ sɛ m’akoa Dawid a odii me mmara nsɛm so na ɔde ne koma nyinaa dii m’akyi, na nea ɛteɛ nkutoo na ɔyɛe m’anim+ no; 9 woayɛ bɔne asen wɔn a wodii w’anim nyinaa, na woayɛ nyame foforo+ ne dade ahoni+ de ahyɛ me abufuw,+ na me de, woatow me akyene w’akyi;+ 10 eyi nti mede mmusu reba Yeroboam fie so, na metwa Yeroboam fie barima+ biara akyene, Israel nipahunu a onni ɔboafo+ mpo; mɛpra Yeroboam fie nyinaa akɔ+ sɛnea obi pra nantwibin kɔtow gu no.+ 11 Yeroboam ho nipa biara a obewu wɔ kurow mu no, akraman na ebedi ne nam,+ na nea obewu wɔ wuram no, wim nnomaa na ebedi ne nam,+ efisɛ Yehowa na waka.”’ 12 “Enti sɔre na kɔ wo fie. Sɛ wo nan si kurow no mu ara pɛ a, abofra no bewu. 13 Israel nyinaa besu no+ na wɔasie no, na ɔno nkutoo ne Yeroboam ho nipa a wobesie no, efisɛ Yehowa, Israel Nyankopɔn ahu adepa bi wɔ ne ho, Yeroboam fiefo mu.+ 14 Na Yehowa bɛma ɔhene bi so+ wɔ Israel a obetwa Yeroboam fie akyene da no, na sɛ ɛba mu saa bere yi nso ɛ?+ 15 Yehowa bɛbɔ Israel sɛnea demmire hinhim nsu mu,+ na obetutu+ Israel ase afi asase pa+ a ɔde maa wɔn agyanom yi so, na ɔbɛbɔ wɔn apete+ akɔ asubɔnten kɛse+ no agya, abosonnua+ a wɔayeyɛ de ahyɛ Yehowa abufuw+ nti. 16 Na Yeroboam bɔne a wayɛ a ama Israel nso ayɛ bɔne+ nti, ɔbɛpo Israel.”+ 17 Ɛnna Yeroboam yere sɔre siim kɔɔ Tirsa.+ Bere a ɔreyɛ adu ofie no kwan ano no, abofra no wui. 18 Enti wosiee no, na Israel nyinaa suu no sɛnea Yehowa asɛm a ɔnam n’akoa odiyifo Ahiya so kae no te. 19 Yeroboam ho nsɛm a aka, n’akodi+ ne sɛnea odii ade no, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Israel ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 20 Nna a Yeroboam de dii hene no si mfe aduonu abien, na ɛno akyi no, ɔne n’agyanom kɔdae,+ na ne ba Nadab+ bedii n’ade. 21 Solomon ba Rehoboam+ nso dii hene wɔ Yuda. Rehoboam bedii ade no, na wadi mfe aduanan biako, na odii ade mfe dunson wɔ Yerusalem, Israel mmusuakuw+ no nyinaa kurow+ a Yehowa paw sɛ ne din ntena hɔ+ no mu. Ne maame din de Naama a ɔyɛ Ammonni.+ 22 Na Yuda kɔɔ so yɛɛ Yehowa ani so bɔne+ de huruu ne bo+ sen nea wɔn agyanom de wɔn bɔne yɛe no nyinaa.+ 23 Wɔn nso yeyɛɛ sorɔnsorɔmmea+ ne abosom adum+ ne abosonnua+ wɔ nkoko atenten+ nyinaa so ne nnua kusuu+ nyinaa bi ase. 24 Ná asɔrefie mmarima nguaman mpo wɔ asase no so.+ Wɔyɛɛ akyide a amanaman a Yehowa pam wɔn fii Israelfo anim no yɛe nyinaa bi.+ 25 Ɛbae sɛ Ɔhene Rehoboam afe a ɛto so anum mu no, Egypt hene Sisak+ baa Yerusalem so. 26 Na ɔfaa Yehowa fie akorade ne ahemfie hɔ akorade+ no. Ɔfaa biribiara;+ ɔfaa sika akyɛm a Solomon yɛe no nyinaa nso.+ 27 Ɛno nti Ɔhene Rehoboam yɛɛ kɔbere akyɛm de sii ananmu, na ɔde hyɛɛ ammirikatufo+ a wɔwɛn ahemfie pon ano+ no mpanyimfo nsa. 28 Na bere biara a ɔhene bɛba Yehowa fie hɔ no, ammirikatufo no ba bɛsesaw, na wɔsan de kɔ awɛmfo dan+ no mu. 29 Rehoboam ho nsɛm a aka, nea ɔyɛe nyinaa, wɔakyerɛw wɔ Yuda ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu. 30 Akodi bɛdaa Rehoboam ne Yeroboam ntam daa.+ 31 Na Rehoboam ne n’agyanom kɔdae, na wosiee no kaa n’agyanom ho wɔ Dawid Kurow+ mu. Ne maame din de Naama a ɔyɛ Ammonni.+ Na ne ba Abiam+ bedii n’ade.